अवस्था कल्पना गर्नुहोस् - चौथो दिनमा फेब्रुअरी कुनै समय बाँकी थिएन, र तपाईंको प्रिय केटीको लागि उपहार अझै खरिद गरिएको छैन! तपाईं एक आतंकमा हुनुहुन्छ, र एक व्यक्ति अझै पनि भनिन्छ ... फरवरी 14 मा केटीलाई के गर्ने? यो प्रश्न छुट्टै छुटहरूको पूर्वसामानलाई सोधिएको छ। म तंग हुन चाहन्न, म तिमीलाई र सबै रचनात्मक चाहन्छु यसको सराहना गर्न।
यदि तपाईं फूलको छनौट सम्बन्धी आफ्नो केटीको प्राथमिकताहरू जान्नुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो प्रिय प्रेमिकाको विशाल गुलाबको साथमा एक विशाल स्केटलेट गुड्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंको लागि फूलहरू - ठोस छ, र प्रश्न खुला रहन्छ, त्यसपछि अवस्था कसरी हटाउन र 14 फरवरी को केटीलाई के गर्ने? तपाईं प्रस्तावित गर्न सक्नुहुन्छ, उत्कृष्ट उपहारको रूपमा, एक सुपर-आधुनिक र महंगा स्पा सैलूनमा एक प्रमाण पत्र। सर्दियाको चिसोमा, सारा दिन बिताउनुहोस् र सुन्दर सैलूनमा धेरै रमाइलो पाउनुहोस् - जुन एक जना केटीको लागि आफुको हेरचाह गर्न मनपर्छ को लागी राम्रो हुन सक्छ।
फेब्रुअरी 14 मा केटीलाई उपहार, भित्री विशेष मौलिकता भए तापनि हृदयबाट बनाइएको हुनुपर्छ र हरेक केटीले बुझ्दछ।
आधुनिक संसार एकैछिन परिवर्तन भएको छ, अब यसलाई मूल्य ट्यागको साथ उपहार दिन को लागी नराम्रो ढाँचा मानिएको छैन, ताकि जब उनि फिट छैन भने, तपाईले स्टोरमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। यसैले, यदि आप व्यावहारिक अमेरिकियों जस्तै बनने को शर्मिंदा नहीं मानते हो, तब फेब्रुअरी 14 को लागि एक उपहार एक स्टोर लेबल संग ला सकते हो। यो एक स्टाइलिश पोशाक गहने, ककटेल वा गहना बक्सको लागि चश्मेको एक सेट हुन सक्छ । कुनैपनि अवस्थामा, तपाईंको मनपर्ने सधैँ केहि अन्यसँग यसलाई बदल्न सक्षम हुनेछ।
वेलेंटाइन डे एक छुट्टी छैन जब तपाईं जीवनको कुनै पनि अवसरको लागि "उपहारको रूपमा" लिफाफे ल्याउन सक्नुहुन्छ। यस्तो इशारा एक केटी को कोरमा अपमान गर्न सक्छ, त्यसैले 14 फरवरी को केटीलाई के गर्ने प्रश्नको प्रश्न, तपाइँलाई रोमान्टिक नोटसँग निर्णय गर्न आवश्यक छ। यो सबै प्रेमीहरूको दिन हो, कसरी रोमान्स बिना?
यदि तपाईं प्रेमको रोमान्टिक अभिव्यक्तिहरूमा विश्वास बलियो छ भने, त्यसपछि तपाईंको प्रियको लागि उत्तम उपहार हात र हृदयको प्रस्ताव हुनेछ, जुन केही सुन्दर फारममा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तपाईं गुलाबमा एक नाजुक गुलदस्ता वा गुलाबडु लुकाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ 14 फरवरी को केटी को लागि एक राम्रो वरदान हुन सक्छ त्यहि एक प्रस्ताव र अनन्त प्रेम मा पहिचान को तुलना मा।
सायद तपाईंको प्रेमिकालाई केहि चीजको आदी छ, र तपाईले उनीहरूको प्राथमिकताहरू थाहा छ, त्यसपछि, आफ्नो शौक र शौक अनुसार, तपाईं उपहारको छनौट संग नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। शायद त्यो केहि विदेशी व्यञ्जन मा रुचि छ? यस अवस्थामा, फेब्रुअरी 14 केटीको लागि उपहार एक पाठको रूपमा हुन सक्छ, जुन तपाइँले प्रसिद्ध शेफ बाट आदेश दिनुहुन्छ। र यदि तपाईं पछि पकाएको खाना स्वाद गर्न सक्नुहुनेछ भने, यो एक असली आश्चर्य हुनेछ। यदि उनी फोटोग्राफीको शौक हो भने, आश्चर्यजनक आश्चर्य फोटो फोटो वा एक संगोष्ठीको लागि एक उपहार कुपन हुन सक्छ, जहाँ एक पेशेवरले मास्टर सबकहरू सिकाउँछन्।
तपाईंको प्रेमिकालाई शीत जाडोको दिनमा अविस्मरणीय आनन्द प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि उसलाई दुईवटा थोरै देशको लागि टिकट दिनुहोस्। तपाईंको जुनूनको हृदय दक्षिणी सूर्यको किरण भित्र पसेको छ।
नबिर्सनुहोस् कि सेन्ट वेलेंटाइन दिन एक छुट्टी छ जो हामीलाई देखि बाहिर आउनुभयो, तर हाम्रो देशमा पूर्णतया मान्यता प्राप्त भयो। यो दिन हो जब प्रेम संसारको नियम गर्दछ र एउटा विशाल संख्या "वैलेंटाइन", टेडी भालू, फूल र मिठाई बेच्छ।
14 फरवरीमा केटीलाई के गरौं भने, यदि त्यो मीठो दाँत हो भने? केहि पनि सजिलो छैन! केक र पेस्ट्री को बहुतायतको हृदय, गुलाब र अन्य रोमांटिक रूपहरु मा कन्फेक्शनरीरीहरु को अलमारियों मा पेश गरिन्छ। यस्तो इज्याली खिलौने र एक गुलाबी सँगै एक केक युवा युवतीको "वेलेंटाइन" संग ध्यान को उल्लेखनीय चिन्ह हुनेछ। सारा दिन उनको साथ बिताउनुहोस्, चलचित्रहरूमा जानुहोस्, र साँझमा तपाईले केक दिनुभयो। सायद कसैले र त्रासको लागि, तर शुद्ध हृदयको साथ! र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सल्लाह: तपाईको "अन्तर्वार्ता" को प्रयोग गर्नुहोस्, कुन प्रश्न "यसका लागि फरवरी 14 मा केटीलाई के गर्ने?" तपाईंको लागि समस्या हुन बन्द हुनेछ।
लोगोको साथ क्रिसमस बलहरू - यसले यो चमत्कार कसरी जन्मायो
पूर्वप्राथमिक बच्चाहरु लोक Tales हालतमा मानव मान को गठन मा शिक्षा को सिद्धान्त मा रिलायन्स
अजवाइन सूप - एक नुस्खा सिफारिस
के रक्सी बढ्छ वा दबाब घट्छ? केही indisputable तथ्य
बिक्री कसरी वृद्धि गर्ने
स्क्रैप सामाग्री देखि एक घर इन्जिन ले साइकिल कसरी इकट्ठा गर्न?
को रेनल्ड्स नम्बर खोजी
Hairless बिरालोहरु को नस्ल विचार